ဘဏ်တွေမှာ ငွေကြေးအလုံအလောက်ရှိပြီသားဖြစ်တာကြောင့် ပြည်သူတွေတွေအနေနဲ့ စိတ်ပူစရာမလိုဘူးလို့ ဗဟိုဘဏ်ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးမင်းက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
at 9/06/2019 03:07:00 PM No comments:
စာတိုက်အွန်လိုင်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုတွင် လိမ်လည်မှုများ ရှိနေဟု ထုတ်ပြန်ကြေညာ
မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းရဲ့ ပစ္စည်းရောက်မှ ငွေကောက်ခံပေးခြင်း (Cash On Delivery Service) ဝန်ဆောင်မှုကို သုံးပြီး လိမ်နေတဲ့သူတွေရှိနေတယ်လို့ သက်ဆိုင်ရာက ကြေညာထားပါတယ်။
at 9/06/2019 03:06:00 PM No comments:
at 9/06/2019 03:04:00 PM No comments:
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သစ်ပုတ်ပင် အပြာရောင်ကမ္ဗည်း (Blue Plaque) ပြား တပ်ဆင်
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ အထင်ကရ သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည့် သစ်ပုတ်ပင်ကြီးအား ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အပြာရောင်ကမ္ဗည်း (Blue Plaque) ပြား တပ်ဆင်သည့် အခမ်းအနားကို ယနေ့ စက်တင်ဘာ ၆ ရက် တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
at 9/06/2019 02:54:00 PM No comments:
ပင်းတလဲမှ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး မြင်တွေ့ရသော ဖြူဖြူထွေး
at 9/06/2019 02:50:00 PM No comments:
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ညွှန်ကြားချက်ကို ချိုးဖောက်သည့် မန္တလေးတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်အား စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖြင့် စစ်ဆေးမည်
မန္တလေးတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ် ဒေါ်သီတာဝင်းက နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကို ချိုးဖောက်ပြီး သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ သူကို Food Court လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့  ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အခြေအနေကို ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနက စက်တင်ဘာ(၆)ရက်က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုလည်း ဆက်လက် ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
at 9/06/2019 01:59:00 PM No comments:
တောင်ကိုရီးယား- မြန်မာ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ရန် သဘောတူ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်မှု အရှိန်မြှင့်ရန်နှင့် တိုးတက်ရေးတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် တောင်ကိုရီးယား၏ သမ္မတက နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အင်္ဂါနေ့က တွေ့ ဆုံပြီးနောက် ကတိပြုသည်။
at 9/06/2019 12:16:00 PM No comments:
တနင်္သာရီမြစ်ရေ ဒုတိယအကြိမ်ရေကြီးမှု ရက်ပေါင်း ၂၀ ကျော်လာပြီဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ၄၀၀၀ ကျော် ရေဘေးသင့်ကာ စာသင်ကျောင်း ၁၉ ကျောင်း ပိတ်ထားရ
တနင်္သာရီမြစ်ရေ ဒုတိယအကြိမ်ရေ ကြီးမှုမှာရက်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ပြီဖြစ်ပြီး မြစ် ရေကြီးမှုကြောင့် လူဦးရေ ၄၀၀၀ ကျော် ရေ ဘေးသင့်နေကာ စာသင်ကျောင်းပေါင်း ၁၉ ကျောင်းပိတ်ထားရကြောင်း သိရသည်။
at 9/06/2019 12:09:00 PM No comments:
ဘဏ်လုပ်ငန်း ကောလာဟလသတင်းများကြောင့် ပြည်တွင်းရွှေဈေး ပိုမိုမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး ကောလာဟလများ တည်ငြိမ်သွားပါက ရွှေဈေးပြန်လည်ကျဆင်းနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်
ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး၊ ဒေါ်လာဈေးများ မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၏ ကောလာဟလ သတင်းများကြောင့် ဘဏ်တွင်အပ်နှံထားသောငွေများထုတ်ယူပြီး ရွှေဝယ်ယူစုဆောင်းသူများလာသောကြောင့် ပြည်တွင်းရွှေဈေး ပိုမိုမြင့်တက်လာနေခြင်းဖြစ်ပြီး ကောလာဟလများတည်ငြိမ်သွားပါက ပြန်လည်ကျဆင်းသွားနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးမြင့်နှင့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းမြင့်တို့က သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
at 9/06/2019 12:07:00 PM No comments:
ရွှေဈေး ဆက်တိုက်တက်လာပြီး ကျပ် ၁၃ သိန်းအထက် ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်ရှိ
ဈေးကွက်အတွင်း ရွှေကို အလုအယက် ၀ယ်ယူနေခြင်း ကြောင့် ပြည်တွင်းရွှေဈေး တစ်ကျပ်သားလျှင် ကျပ် ၁,၃၀၇,၀၀၀ အထိ မြင့်တက်လာလာသည်ဟု ပြည်တွင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်များက ဆိုသည်။
at 9/06/2019 12:04:00 PM No comments:
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲမသမာမှုများမပြုလုပ်ရန်၊ စစ်မှန်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဝေနိုင်ရန်နှင့် Facebook ကို အလွဲသုံးခြင်းများမရှိစေရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြောင်း Facebook တာဝန်ရှိသူများ သတင်းစာရှင်းလင်း
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲမသမာမှုများ မပြုလုပ်ရန်၊ စစ်မှန်သည့် သတင်းအချက် အလက်များ ဖြန့်ဝေနိုင်ရန်နှင့် Facebook ကို အလွဲသုံးခြင်းများမရှိစေရန် ကြိုတင်ပြင် ဆင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း Facebook မှ တာဝန်ရှိသူများက ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
at 9/06/2019 11:57:00 AM No comments:
at 9/05/2019 03:58:00 PM No comments:
၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေကြမ်း အပိုဒ် ၂၅ တွင် ပါဝင်သည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်သည် နှုန်းထားများနှင့် အခွန်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးခြင်းဖြစ်၍ ပယ်ဖျက်သင့်ကြောင်း NLD လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အကြံပြု
၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေကြမ်း အပိုဒ် ၂၅ တွင်ပါဝင်သည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်သည် နှုန်းထားများနှင့် အခွန်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးခြင်းဖြစ်၍ ပယ်ဖျက်သင့်ကြောင်း NLD ပါတီ၏ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၇) မှ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာပြည့်ဖြိုးက အကြံပြုဆွေးနွေးသည်။
at 9/05/2019 02:29:00 PM No comments:
မော်တော်ယာဉ်ကို နေရာရွှေ့ပေးမည်ဟုဆိုကာ မောင်းယူထွက်ပြေးသူကို ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ကျောက်ဆည်မြို့နယ်မှာ စက်တင်ဘာလ (၄)ရက်က အလုပ်ရှင်ပိုင်ဖြစ်တဲ့ PAJERO အမျိုးအစားမော်တော်ယာဉ်ကို နေရာရွှေ့ပေးမယ်ဆိုပြီး မောင်းနှင်ထွက်ပြေးခဲ့သူကို ၀မ်းတွင်းမြို့နယ်ထဲမှာ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးခဲ့ပေမဲ့ အဖမ်းမခံဘဲ ပြန်လည်ခုခံဖို့ ကြိုးပမ်းတာကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က ကားဘီးတွေကို သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ကာ ဖမ်းဆီးခဲ့ရတယ်လို့ ၀မ်းတွင်းမြို့မ ရဲစခန်းထံက သိရပါတယ်။
at 9/05/2019 02:26:00 PM No comments:
နှစ်ပေါင်းရာချီ ကြာမြင့်ပြီဖြစ်သော ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရှိ သစ်ပုတ်ပင်ကြီးအား အပြာရောင်ကမ္ပည်းပြား တပ်ဆင်မည်
နှစ်ပေါင်းရာချီ ကြာမြင့်ပြီဖြစ်သော ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရှိ သစ်ပုတ် ပင်ကြီးအား စက်တင်ဘာ ၆ ရက်တွင် ၃၂ ခုမြောက်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ပြ၏ သဘာဝအမွေအနှစ် အပြာရောင်ကမ္ပည်းပြားကို တပ်ဆင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
at 9/05/2019 02:21:00 PM No comments:
မန္တလေး-လားရှိုး-မူဆယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်၌ ဖြတ်သန်း သွားလာလျက်ရှိသည့် မော်တော်ယာဉ်များအား အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများက အကြောင်းမဲ့ ထပ်မံပစ်ခတ် မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခဲ့ကြ
မန္တလေး-လားရှိုး-မူဆယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်၌ ဖြတ်သန်း သွားလာလျက်ရှိသည့် မော်တော်ယာဉ်များအား အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများက အကြောင်းမဲ့ ထပ်မံပစ်ခတ် မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခဲ့ကြ ကြောင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
at 9/05/2019 02:14:00 PM No comments:
at 9/05/2019 02:10:00 PM No comments:
TikTok ဆော့ကစားနေတဲ့ စိန်လင်းနဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး တိုရဲ့ ကော်ရီးသီချင်း
at 9/05/2019 02:05:00 PM No comments:
at 9/05/2019 01:48:00 PM No comments:
at 9/05/2019 01:46:00 PM No comments:
ဒေါက်တာ နန်းမွေစံ ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီမှ အထွေထွေဆေးကုသခွင့် လက်မှတ်ရုပ်သိမ်းခံပြီးနောက် ပရိတ်သတ်တွေကြားပိုမိုနာမည်ကြီးလာတဲ့ ယောကျာ်းလေး ပရိတ်သတ်တွေကြား ဝန်းရံအားပေးမှုကို ရရှိခဲ့တဲ့ မော်ဒယ် ဖြစ်ပါတယ်။
at 9/05/2019 01:32:00 PM No comments:
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ ကိုရီးယားဘဏ်တို့ ပူးပေါင်းပြီး ဒလမြို့သစ်ဖော်ဆောင်ဖို့နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြို့ပြနဲ့အိမ်ရာတွေ ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်း လျှပ်စစ်၊စက်မှုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒေါ်နီလာကျော်က ပြောပါတယ်။
at 9/05/2019 11:51:00 AM No comments:
နိုင်ငံတဝန်း လူပေါင်း ၁၃၀၀၀ ကျော် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွား ၆၈ ဦးသေဆုံး
ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လအထိ တနိုင်ငံလုံးမှာ လူပေါင်း ၁၃၀၀၀ ကျော် သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ခဲ့ပြီး ၆၈ ယောက်သေခဲ့ တယ်လို့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
at 9/05/2019 11:49:00 AM No comments:
မော်လမြိုင်မြို့တွင် တိုက်ခတ်ခဲ့သော လေပြင်းကြောင့် နေအိမ် ၅၇၀ ကျော်နှင့် စာသင်ကျောင်း ခြောက်ကျောင်း ထိခိုက်ပျက်စီး
မော်လမြိုင်မြို့တွင် စက်တင်ဘာ၂ ရက် ည ၁၀ နာရီခွဲခန့်က တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် လေပြင်းကြောင့် နေအိမ် ၅၇၀ ကျော်နှင့် စာသင်ကျောင်း ခြောက်ကျောင်း ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း မော်လမြိုင်မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။
at 9/05/2019 11:31:00 AM No comments:
at 9/05/2019 11:28:00 AM No comments:
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံသား(၁၄)ဦးအား ပထမအဆင့် ရွေးချယ်ထားဟုဆို
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်မှာ ဂျပန်လူမျိုး သရုပ်ဆောင်နေရာအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံသားအစစ်တွေကို ထည့်သွင်းရိုက်ကူးဖို့ လူတွေ့စစ်ဆေးရွေးချယ်တာတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ရာမှာ လတ်ရှိ(၁၄)ဦးကို ပထမအဆင့် ရွေးချယ်ထားတယ်လို့ အကယ်ဒမီ လူမင်းက ပြောပါတယ်။
at 9/05/2019 11:12:00 AM No comments:
မြွေမအဆင်ဖက်ရှင်နဲ့ ညို့အားပြင်းလွန်းနေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို ရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ၊ကြော်ငြာတွေကို ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးနေရတဲ့ အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ သူမရဲ့ တမူထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ ဖက်ရှင်တွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေကြားမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
at 9/05/2019 11:04:00 AM No comments:
အသည်းယားစရာကောင်းလွန်းတဲ့ ချစ်စရာဓါတ်ပုံလေးတွေ ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း
ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေ ရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းကတော့ ဖေစ်ဘုတ်ပေါ် ကနေတစ်ဆင့် လူသိများလာတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ နွယ်နွယ်ထွန်းကတော့ ဖိုတိုမော်ဒယ် တစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပြုလုပ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
at 9/05/2019 10:53:00 AM No comments:
at 9/05/2019 10:46:00 AM No comments:
မြောက်ဒဂုံ၊ (၄၈)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးတန်ဖိုးမျှအိမ်ရာ၊ တိုက်(A-1)၊ အခန်း(၅၀၁)တွင် တစ်ဦးတည်းနေထိုင်တဲ့ Mrs. Kim Min Sook(ကိုရီးယားနိုင်ငံသူ) ကို Air Con လာရောက်ပြုပြင်ပေးသူက တွန်းလှဲပြီး ဂေါက်တံဖြင့်ရိုက်ကာ ဖုန်း၊ ငွေနှင့် ရွှေထည်ပစ္စည်းများ စုစုပေါင်းတန်ဖိုး ငွေကျပ် သိန်း(၃၀၀)ခန့်အား လုယူသွားမြှု စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ည ၉း၃၀ အချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။Mrs. Kim Min Sook တွင် ဒဏ်ရာများ ရရှိ၍ မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံတွင်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်။
at 9/04/2019 04:38:00 PM No comments:
အထူးနူးညံ့ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ပိုးချည်မျှင်များ ဖြင့် ရက်လုပ်ထားသော "ရွှေလွန်းလိပ်ပြာ" ချိတ် နှင့် လုံချည် ရဲ့ အသစ်ထွက်ရှိမယ့် Design အတွက် ကြော်ငြာ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးပေးနေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဖွေးဖွေး.....
at 9/04/2019 04:06:00 PM No comments:
at 9/04/2019 03:59:00 PM No comments:
ဗစ်တိုးရီးယားအမှုအား စစ်ဆေးနေသည့် ဒုခရိုင်တရားသူကြီး ကွယ်လွန်
နေပြည်တော် မူလတန်းကြိုကျောင်းမှ လိင်အကြမ်းဖက်ခံရသည့် ဗစ်တိုးရီးယားအမှုအား ပါဝင်စစ်ဆေးနေသည့် ဒုတိယ ခရိုင်တရားသူကြီး ဦးညိုဌေးသည် ယနေ့တွင် ကွယ်လွန်သွားကြောင်း နေပြည်တော် ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးမှ သိရသည်။
at 9/04/2019 03:52:00 PM No comments:
at 9/04/2019 03:48:00 PM No comments:
ဟေတီတွင် အတိုက်အခံ ထောက်ခံသူများ လွှတ်တော်အတွင်း ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီး
ဟေတီနိုင်ငံ မြို့တော် ပို့စ်အော်စပရင်မှာ စက်တင်ဘာ ၃ ရက်နေ့က အတိုက်အခံ ထောက်ခံသူတွေ လွှတ်တော်အတွင်း ဝင်ရောက် ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ပါတယ်။
at 9/04/2019 03:40:00 PM No comments:
လေယာဉ်ဖြင့်လာသည့် တရုတ်ခရီးသွားများအတွက် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ ၁ နှစ်ထပ်တိုးပေး
မြန်မာပြည်ကို လေကြောင်းနဲ့လာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား ခရီးသွားတွေအတွက် ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာကို ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ အဖြစ်ပေးနေတာကို တနှစ်ထပ်တိုးပေးလိုက်တယ်လို့ ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာပါတယ်။
at 9/04/2019 03:38:00 PM No comments:
ဇီးရိုးဘတ်ဂျက် ခရီးသွားများကို အဆင့်တစ်ခု သတ်မှတ်၍ ထိန်းချုပ်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒေသဆိုင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကော်မတီ တာဝန်ရှိသူပြောကြား
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်လာသည့် ဇီးရိုးဘတ်ဂျက် ခရီးသွားများကို အဆင့်တစ်ခု သတ်မှတ်ကာ ထိန်းချုပ်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒေသဆိုင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုးက ပြောကြားသည်။
at 9/04/2019 03:37:00 PM No comments:
ဒီမိုကရေစီဆိုပြီး သွားနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပုံစံက နားလည်ရခက်နေတယ်လို့ ဗိုလ်မှုးချုပ်မောင်မောင်ပြော
ယနေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်အဝေးတွင် မိတ္တီလာမဲ ဆန္ဒနယ်မှ ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမောင်သင်း အပါ အဝင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၄၅ ဦးတင်ပြထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်းအား ၄၅ ဦးပါဝင်သည့် ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီတွင် ထည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နာယက ဦးတီခွန်မြတ် က ကြေညာခဲ့သည်။
at 9/04/2019 03:32:00 PM No comments:
တနင်္သာရီမြို့မှာ မြစ်ရေကြီး စာသင်ကျောင်း ၁၇ ကျောင်း ပိတ်ထားရ
တနင်္သာရီမြို့မှာ မြစ်ရေကြီးပြီး မြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေအမှတ်အထက်ရောက်နေတာကြောင့် စာသင်ကျောင်း ၁၇ ကျောင်း ပိတ်ထားရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
at 9/04/2019 02:01:00 PM No comments:
ပုသိမ်မြို့ Myanmar Knitting အထည်ချုပ်အလုပ်သမားများ တတိယနေ့အဖြစ် ဆက်လက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်
လုပ်ငန်းရှင်နှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု မပြေလည်သည့်အတွက် ပုသိမ်မြို့စက်မှုဇုန်ရှိ တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင် Myanmar Knitting အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ အလုပ်သမား ၁ဝဝဝ ကျော်မှာ တတိယနေ့အဖြစ် ဆက်လက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
at 9/04/2019 01:56:00 PM No comments:
" ကိုကို စိတ်ကူးယဉ်" သီချင်းလေးနဲ့ ကပြဖျော်ဖြေသွားတဲ့ ဒို့အညာက မြန်​မာ့အနုပညာ ၁၀ကြည့်​ ၁၀ခါ ​မော​တွေ​ပြေ​စေတယ်....
at 9/04/2019 01:53:00 PM No comments:
at 9/04/2019 01:07:00 PM No comments:
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့မူကြမ်းကို ၄၅ ဦးကော်မတီမှာ ထည့်သွင်းဆွေးနွေးမည်
ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမောင်သင်း တင်သွင်းတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ဥပဒေမူကြမ်းကို ၄၅ ဦးပါဝင်တဲ့ ပူးပေါင်းကော်မတီမှာ ထည့်သွင်းဆွေးနွေးဖို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ဒီနေ့ဆုံးဖြတ် လိုက်ပါတယ်။
at 9/04/2019 12:56:00 PM No comments:
AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့၏ အမာခံများက ဝါးတောင် ကျေးရွာ၌ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူနှစ်ဦးအား အကြောင်းမဲ့ သတ်ဖြတ်ဟု တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး သတင်းထုတ်ပြန်
AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့၏ အမာခံများက ဝါးတောင် ကျေးရွာ၌ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူနှစ်ဦးအား အကြောင်းမဲ့ သတ်ဖြတ်ဟု တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
at 9/04/2019 12:50:00 PM No comments:
ပြန်မလာချင်သည့် နေရပ်စွန့်ခွာသူများ အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့ကွဲနေဟုဆို
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေ အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့ကွဲနေဟု မောင်တောခရိုင် ဒုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောပါတယ်။
at 9/03/2019 04:23:00 PM No comments:
သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြသည့် ကျောင်းသူ (၂) ဦး ဆေးရုံတင်ပို့လိုက်ရ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ညွှန်ကြားချက်နှင့် တည်ဆဲဥပဒေအား ဖောက်ဖျက်လုပ်ဆောင်သော ကျောင်းအုပ်ချူပ်ရေးအဖွဲ့ကို စီစစ်အရေးယူပေးရေး အတွက် သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြနေသည့် မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ မှ ကျောင်းသူ (၂) ဦးကို စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းအချိန်က ဆေးရုံတင်ပို့လိုက်ရကြောင်း သိရသည် ။
at 9/03/2019 04:13:00 PM No comments:
အာဏာရပါတီ တည်မြဲရေးကိုသာ ရည်ရွယ်နေတယ်ဆိုတာ မြင်ပြီး ကိုယ်စားလှယ် ၂ ယောက် နုတ်ထွက်လိုက်တာ လို့ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ထုတ်ပြန်
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားတွေလိုလားတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး အခန်းကဏ္ဍဟာ ပီပြင်စွာပါဝင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမရှိတာရယ်၊ လက်ရှိအာဏာရ ပါတီ တည်မြဲရေးကိုသာ ရည်ရွယ်နေတာတွေ့ရတယ်ဆိုပြီး ရခိုင်အမျိုးသားပါတီဟာ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ကော်မတီကနေ နုတ်ထွက်ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
at 9/03/2019 04:10:00 PM No comments:
နှစ်သန်း ၂၀၀ ကျော်က ဒိုင်နိုဆောမျိုးနွယ်ဝင် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း လားရှိုးတွင်တွေ့ရှိ
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၂၀၀ ကျော်က ဒိုင်နိုဆောမျိုးနွယ်ဝင် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတခုကို ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့နားကနေ တွေ့ထားတယ်လို့ အစိုးရသတင်းစာမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
at 9/03/2019 03:57:00 PM No comments:
at 9/03/2019 01:23:00 PM No comments:
တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ Mr. Moon Jae-in နေပြည်တော် ရောက်ရှိ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး သွားရောက်လျက်ရှိသည့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ သမ္မတ H.E. Mr. Moon Jae-in နှင့်ဇနီး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၃-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀ နာရီ ၄၀ မိနစ် အချိန်တွင် နေပြည်တော်သို့ အထူးလေယာဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့်ဇနီး၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်(ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး)နှင့်ဇနီး၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဌ ဒေါက်တာမျိုးအောင်နှင့်ဇနီး၊ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသန့်စင်နှင့်ဇနီး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများက နေပြည်တော်လေဆိပ်တွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
at 9/03/2019 12:59:00 PM No comments:
at 9/03/2019 12:56:00 PM No comments: